embolism yamaphaphu (PE abbr.) - a ukuvaleka yamaphaphu Umthambo wegazi amahlule (thrombi). Ezimweni eziningi, amahlule igazi angene Umthambo yamaphaphu izitsha wemikhawulo aphansi, ikakhulukazi kusukela vein femoral. Ngaphezu kwalokho, nakuba, futhi ukuvaleka amahlule kuyimbangela eyinhloko ka embolism yamaphaphu, kodwa kukhona ingozi ukuvaleka Umthambo yamaphaphu, namanoni, emoyeni noma emboli angaphandle.
Izimbangela embolism yamaphaphu
Imbangela enkulu yalesi sifo, njengoba embolism yamaphaphu, njengoba kushiwo, thrombosis wemikhawulo aphansi, ngakho abantu abaphethwe varicose emithanjeni, babe nengozi enkulu sebengavela ka embolism yamaphaphu.
Futhi, nezici eziyingozi kungase zihlanganisa khona isiguli izifo sezinzwa ephelezelwa paresis kwamalungu omzimba, ngisho yomdlavuza isigaba asebenzayo, izifo zazo eboshelwe embhedeni nesineke, ukwelashwa kwama-hormone, futhi ukusetshenziswa zokuvimbela inzalo ngomlomo.
Hhayi kuze kube sekupheleni, isekhona kuze kube ngayo ubudlelwano phakathi PE futhi CCH (isifo senhliziyo). Ngaphezu kwalokho, amaphesenti eliphezulu sifo ababhemayo, kubantu abaphethwe nomfutho wegazi ophezulu kanye nokukhuluphala ngokweqile.
Kaningi, e-30% amacala lesi sifo kwenzeka angesabi, ngaphandle ungalokothi uphuze izinto, ikakhulukazi kusukela izimpawu ngabanye isifo musa angena konke okuhilelekile lesi sifo, asizange kunakwe.
yezinkinga Thromboembolic (izimpawu)
Ngo-90% azo zonke amacala embolism yamaphaphu iqala ubuhlungu esifubeni, dyspnoea (Ukuphelelwa) kanye nesimo semiconscious, futhi lezi zimpawu zingatholakala konke ndawonye, noma ngokwehlukana.
Izindlela ekuxilongeni embolism yamaphaphu
Ukunqunywa Plasma D-dimer egazini. D-dimer - ikhemikhali eliwumkhiqizo we cleavage ka fibrin. ezingeni layo ukwenyuka oketshezini olungenambala lwegazi ebukhoneni amahlule, ie-D-dimer ungakwazi ukubala ingozi embolism yamaphaphu, noma okungenani embolism emithambo yegazi.
CT venography. Njengoba pate ngo-90% we Kutholwe vein thrombosis wemikhawulo aphansi, kungenzeka ukuvimbela isifo ngaphambili okwenza CT venography.
Ukupholisa-perfusion stsinigrafiya. I-AMS iyindlela omunye ephephile Izindlela ukuxilongwa of embolism yamaphaphu - namuhla wembula kancane kakhulu ukuphendula iguliswa umuthi zokuxilonga. Isimiso ezisebenza we Upu - ukwethulwa esinelebuli albumin izinhlayiya ukuthi ukuhlola wamaphaphu perfusion ezingeni izicubu.
Angiography imithambo yamaphaphu. Angiography - indlela umdala ngokwanele ukuxilonga izifo ezifana embolism yamaphaphu. Namuhla indlela usebhekene ukuthuthukiswa isisindo, ukuze, ngisho ngobukhulu thrombus 1 mm singasetshenziswa visualized ngokusebenzisa angiography.
Echocardiography. Ukwanda ventricle yangakwesokudla senhliziyo itholakala ingxenye yesine yayo yonke iziguli ezine-PE, ngakho lokhu indlela uphethwe nakho kubalulekile kakhulu.
Ukulapha nokuvikela yezinkinga thromboembolic.
ukwelashwa olandelanayo. It ukhonza njengelungu ukwelashwa nokugcinwa impilo phakathi nezinye izinyathelo zokwelapha.
Thrombolysis. yokwelapha Thrombolytic kunomphumela omuhle hemodynamics futhi kakhulu isheshisa ukuvimbela.
ukwelashwa anticoagulant. Namuhla cishe anticoagulation ungumholi phakathi kwazo zonke izindlela nokwelashwa embolism yamaphaphu. Ukwelashwa kuyinto ongaphakeme yamangqamuzana isisindo heparin nezinye izindlela aktikoagulyatornymi.
izihlungi emithambo yegazi. Ogibele emithanjeni ezijulile wemikhawulo aphansi, thrombus ekuvimbeleni ngiye esitezi. izihlungi ezinjalo kungaba impela isikhathi eside, sisiza abantu ukuba bagweme yezinkinga thromboembolism emithambo yegazi.
Embolectomy - indlela kuhlinzwa yokususa thrombus, iye yasetshenziswa ngempumelelo kusukela 1924, ngakho kukhona inala ongakhetha ukuze iqhube, kuhlanganise catheterization percutaneous nokususwa emboli ngaphandle ukusika.
imithi yesimanje akemi namanje. Odokotela futhi ososayensi njalo ekuthuthukiseni izindlela zokwelashwa. Nokho, watch out for impilo yabo - isibopho endaweni yokuqala endoda ngokwayo.
Amathiphu ambalwa uma ungadluli amakhala yisisu
Izidakamizwa Anthelmintic abantu: ngezigaba, izici
Ukubuyekeza: "Izimpahla Zokugqoka-Master." Usayizi, ikhwalithi kanye inkonzo esitolo inthanethi
Restaurateur Aramu Mnatzakanov ikhishi